शिवपुरी गाउँपालिकाले ल्यायाे बजेटः शिक्षा, सडक खानेपानी प्रमुख प्राथमिकतामा
‘प्रत्येक वडा गौरवको आयोजना’ घोषणा
निर्माण सञ्चार, नुवाकोट । शिवपुरी गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभामार्फत बजेट पारित गरेकाे छ ।
नुवाकोट जिल्ला पूर्वी क्षेत्रको शिवपुरी गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाले बजेट पारित गरेकाे हाे ।
बजेटलगायत उक्त गाउँपालिकाले सबै वडालाई समेट्दै प्रत्येक वडामा ‘एक वडा गौरवको योजना’ ल्याएको छ । उक्त गाउँपालिकाले गाउँपालिकादेखि सदरमुकामसम्म सडक जोड्ने, गाउँमा ३ वर्षभित्र ‘एक घर एक धारा’ को सेवा पुर्याउने, गाउँको समग्र विकासमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणा ल्याइने, टुरिजम पर्यटन गुरु योजना तयार गरिने निति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।
समृद्धि र विकासको आधारमा शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा सहभागीतामूलक दिगो विकासको माध्यमबाट शिवपुरीगाउँ बासीलाई समृद्धि ल्याउने उद्देश्य गाउँपालिकाले लिएको छ ।
आव २०७५/७६ मा ४३ करोड बजेट पारित
शिवपुरी गाउँपालिकाको लागि आव २०७५/७६ को कुल बजेट ४३००५५०००।– पारित भएको छ । आगामी आव २०७५/७६ को राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमानित आय रु. ४३००५५ लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी, कर्मचारी तलब भत्तामा रु. २ करोड ९० लाख, शिक्षा कृषि पशु महिला विकास आदिमा रु. १४ करोड १२ लाख रुपियाँ, सामाजिक सुरक्षा भतामा रु. ६ करोड समेत चालू खर्च जम्मा रु. २३ करोड २ लाख रकम विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूँजिगततर्फ जम्मा रु. १९९८५५०००।– छुट्याएकोमा प्रत्यक वडामा करिब ८७ लाख, पूर्वाधार तथा आयोजना निर्माणमा रु. ५० लाख प्रत्येक वडामा वडा गौरवको पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सञ्चालनको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिका तथा वडा कार्यलय भवन निर्माणमा १ करोड ८० लाख, आयोजना सञ्चालनका लागि म्याचिङ फन्ट १ करोड ४० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमको लागि गाउँपालिकाबाट सशर्त अनुदानबाहेक थप ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आव २०७५/७६ मा विभिन्न विषयका आयोजनाहरु मध्ये शिवपुरी कृषि रिङरोड निर्माण २५ लाख, कृषि पर्यटन गोरेटो बाटो टेरकिङ रुट निर्माण, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ विद्युतिकरण, आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नुवाकोटबाट हरि भेटवालको रिपोर्ट